It is me. Ko Niknayman.: တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ည။
တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညမှာ တိုင်းပြည်နဲ့ သာသနာကို ဖျက်ဆီးနေတဲ့ မိစ္ဆာ စစ်အုပ်စု ရန်မှ ကာကွယ်နိုင်ရန် အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာ အထူး သစ္စာ ကျိန်ဆိုပွဲများ ကျင်းပ ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ တကမ္ဘာလုံးကမျိုးချစ် မြန်မာများလဲ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ မိမိအိမ်တွင်းမှာ နေထိုင်ရင်း လုပ်ဆောင် ပါဝင်ကြပါလို့ ပန်ကြားအပ်ပါတယ်။ သစ္စာဆိုလို့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ သာဓကတွေ ဘုရားဟောမှာရော မြန်မာ့ရာဇ၀င်မှာပါ အထင်အရှား ရှိခဲ့ဖူးတာ မြန်မာတွေ အတော်များများကြားဖူးကြမှာပါ။ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့သာ ပြုလုပ်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
သစ္စာ ကျိန်ဆိုပွဲ အစီအစဉ် ။
တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့တွင် မိမိတို့ နှစ်သက်ရာ သီလကို ဘာသာ အလိုက် ဆောက်တည်ခြင်း၊ အဆင်ပြေရာ ကုသိုလ် ကောင်းမှု တစ်ခု ပြုလုပ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပါ။ လပြည့်ည လရောင်ကို ကြည့်ရင်း ည ဆယ်နာရီခွဲမှ သန်းခေါင်ကြား စစ်အုပ်စု၏ ကံကြမ္မာ မရဏကာလ ကျရောက်ချိန်တွင် တနေ့တာ လုပ်ဆောင် ခဲ့သော ကောင်းမှု ကို အာရုံပြုပြီး မိမိတို့ တသက်တာမှာ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ အမှန်တရား တစ်ခုကို အာရုံပြု ပြီး လေးနက်စွာ သစ္စာဆိုပါ။
ဥပမာ။ ။ကျွန်ုပ်သည် လူမှန်း သိတတ်စ အရွယ်မှ စပြီး နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး အမျိုး ဘာသာ သာသနာနဲ့ နိုင်ငံတော်ကို တိုးတက်စေလိုသော စိတ် အမှန် ရှိပါသည်။ သည် မှန်သော သစ္စာ စကား ကြောင့် နိုင်ငံတော်၊ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ဖျက်ဆီးနေသော မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှ စစ်မိစ္ဆာ အုပ်စုအား တူသော အကျိုးပေးပါစေသား.. သာသနာစောင့် သမ္မာဒေ၀ နတ်ကောင်း နတ်မြတ်များက စစ်မိစ္ဆာ အုပ်စုအား ဒဏ်ခတ် ပါစေသား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အမိမြန်မာပြည်သည်လည်း ရန်သူမျိုးငါးပါးဘေးမှကင်းဝေး၍ တိုးတက်သာယာဝပြော ပါစေသား။